Ngaba isaphulelo kwisaphulelo kwiBranti ngaphezulu kweSimahla? | Martech Zone
Besinengxoxo emnandi malunga nengcaciso yam ezayo kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi malunga nokuba loluphi uhlobo lwesithembiso esinokuyenza kubantu abaya kwiseshoni yam okanye umcimbi wonke. Incoko yeza nokuba ingaba nasiphi na isaphulelo okanye ukhetho lwasimahla lunokuwuthoba ixabiso umsebenzi esiza kuwunika.
Esinye sezifundo endizifundileyo kukuba xa ixabiso libekiwe, ixabiso lisetiwe. Ayisiyongxaki ukuba loluphi uhlobo lweziphumo esizifumanayo kubaxumi bethu, bahlala bephindela kulokho thina do nokuba bayintoni ukusihlawula ukuba sikwenze xa kuthelekiswa nabanye abathengisi. Ke-ukuba sinikezela ngesaphulelo kumthengi kwiprojekthi yokuqala esibonelela ngayo, asikaze sibabone bengena kwiprojekthi yesibini ngexabiso elipheleleyo. Yimpazamo yethu… siwujongela phantsi umsebenzi wethu ngokuthatha isaphulelo kuthethathethwano lwangaphambili.
Izaphulelo ezinzulu zijongela phantsi imveliso okanye inkonzo, zinciphisa amandla eenkampani ukunyusa amaxabiso. URafi Mohammed, iHBR Bambisa izaphulelo.
Kwiiveki ezimbalwa ezidlulileyo, bendixubusha ngale nto kunye nomhlobo wam uJames ongumnini I-Indianapolis pizzeria. Undixelele ukuba angathanda ukunika kude kunesaphulelo. Abantu abenza isampulu yokutya kwasimahla bayaliqonda ixabiso lokutya ngelixa abo bangenayo bethenga iphetshana beze nje kwintengiselwano- hayi umgangatho wokutya. Amakhuphoni athoba ixabiso lemveliso kunye nenkonzo ngoko ke uJames wayeka ukuzenza.
Kuba abathengi bakholelwa ukuba ixabiso lemveliso yasimahla inokuthi ihambelane nexabiso lemveliso ethengiweyo, ukubhangqa imveliso yasimahla nemveliso ephezulu kunokunyusa umbono wexabiso layo. UMauricio M. Palmeira (iYunivesithi yaseMonash) kunye noJoydeep Srivastava (kwiDyunivesithi yaseMaryland) Ngaba abathengi baCinga ukuba iFreebie ibaluleke ngakumbi kuneMveliso enesaphulelo?
Kungenxa yoko ukuhanjiselwa ngenqanawe mahala ithandwa kakhulu kwiindawo ze-ecommmerce. Endaweni yokuxabisa imveliso oyithengisayo, ubonelela ngento ngokongeza-umbono olula wabathengi ukuze baqonde ngaphandle kokuxabisa imveliso okanye inkonzo.
Iziphumo zethu ziyi-anecdotal, kunjalo. Siyazi ukuba xa sithetha-thethana ngokuzibandakanya kwethu kufuneka sihambe kude kunokuba siphule izaphulelo. Okanye sinokufumanisa ukuba kukho imveliso eyongezelelweyo okanye inkonzo esinokukwazi ukuyongeza. Umzekelo, abathengi bethu bafumana ingxelo yeveki kunye nenyanga kaGoogle yokuHlola ebeka i-GA kwingxelo emnandi kakhulu, efundekayo emnandi kwisishwankathelo sesigqeba. Ngelixa sihlawulela inkonzo, lixabiso elongeziweyo esinokuvuya ukulinika ukuba nje sihlawulwe ngokupheleleyo ngeenkonzo esizibonelelayo.
Kwiinkampani zetekhnoloji yokuthengisa, ndingacebisa isilingo sasimahla ngaphezulu kwesaphulelo nangaluphi na usuku. Vumela uvavanyo lwabathengi luqhube iqonga lakho kwaye bazibonele ixabiso-kwaye baya kuyonwabela le nkonzo.
Ngaba usaphulelo? Ngaba ubona iziphumo ezahlukileyo?
tags: amatikitithoba ixabisoisaphuleloisaphulelo xa kuthelekiswa nesimahlakhulula
Umyalezo weLifu udibanisa uMyalezo oThunyelweyo kwiiVenkile zeSelfowuni
Mar 17, 2015 ngo 8:33 PM
Ewe. Andizange ndinciphise.
Mar 18, 2015 ngo-5: 06 AM
soloko isaphulelo esikhulu singumcimbi wokubhidanisa amaxabiso ngoko ke inqanaba lokuthemba liyancipha